School Prom - umcimbi ukuthi nakanjani zikhunjulwe for a lifetime. Akukhona nje yokuvalelisa isikhungo, ibuye okuvalelisa nabangani nokungaqiniseki ukuthi ngakho kuyabethusa futhi ikhanga kokubili abafundi zangaphambili.
Ngomqondo onabile, inkulumo ngobusuku bokugcina nazo zonke izikole cishe okufanayo. Kuyinto umugqa onesizotha ezindongeni isikhungo, ukunikeza izitifiketi iziqu kanye izindondo ehholo yedolobha, ekhonsathini encane, futhi-ke, kwaba khona idili futhi disco merry kuze kuse. Kwaphela lesi senzo umhlangano entathakusa. Zonke obonakala ulula futhi abavamile. Kodwa ngaphezu kwalokho zeminyaka esikoleni uzonikhumbuza izitifiketi nezinkumbulo kungenziwa kancane ukushintsha emcimbini bese beveza ukuthi kuqokwe abantu ezihlekisayo abaneziqu. Kuyodingeka ukugcizelela futhi aveze into ekhethekile kakhulu kuwo wonke wesikole.
Ukukhetha isigaba abaphothule, kuyinto sinake abantu ababeka njalo uthokozile lonke ikilasi futhi wakha isimo ezihlekisayo. Ngakho, kukhona lokuphakamisa kakhulu, "Mnu Jolly" futhi "Miss Laughs" ngubani ncamashi kuyoba umphefumulo abaphakanyisiwe.
Ungaphinde ukhethe bantu abangabahlali enhle ikakhulukazi ekilasini. Ngakho, kuyafaneleka ukuba abaphakanyiselwe "Girls Dream" futhi "Abafana Dream", okuyinto izokwethulwa abantu ukuthandana ne hhayi kuphela lonke ikilasi, kodwa futhi esikoleni.
Ukukhetha isigaba abaphothule, ungakhetha umuntu evela ekilasini eyayibonisa ukuthi wonke umuntu wayezama ukusiza, ukwesekwa futhi uma kudingeka uyajabula. Ifanele kulesi simo ngeke abaphakanyiselwe "ilanga kwekilasi", ezizohlinzeka engcono umfundi okhuthele.
Kunganjani indondo futhi absentees, abamanqikanqika kusiphi isikole? Kubo lokuphakamisa ofanele "Mnu Independence" futhi "Miss Independence", okuyinto hhayi kuphela musa ukudelela, kodwa futhi uzama ukuba bathethelele abafundi okungafanele.
futhi ukunikeza labo bantu ukuphila kwabo konke esikoleni abangane okusheshayo nomunye. Beka them singaba njengesihluthulelo "umngane othembekile (intombi)," lo mbiko uvuma izimfanelo friendly ngempela lomuntu.
lokuphakamisa Excellent abaneziqu - "Ingqondo-class." Lapha ungakhetha umuntu ongeyena kuphela ohlakaniphe kunazo, kodwa futhi ohlale wasiza underachieving futhi wanikeza ukwesulwa umsebenzi wesikole.
isigaba Excellent abaneziqu - "ikilasi umdlali" futhi "ikilasi umsubathi." Lapha kubalulekile ukuba acabangele umfundi ophumelele kwezemidlalo imfundo ngokomzimba, futhi wadwebele izindondo zokuhlonipha.
Funny yokuqokela bafundi nawo uyadingeka. Ngokwesibonelo, "ikilasi Ukuduma". Ungase uyibone ngeso lengqondo abavikeli ofunda nabo, kanye nabantu njalo usungula into-yasungulwa akuphephile futhi. Lokhu lokuphakamisa kungavela kokubili abafana namantombazane, konke kuncike ubunjalo umfundi.
Futhi iziqu bangasetshenziswa kakade ukubona ukuthi ubani esifisa ukuba, futhi kakade abaye yanquma ku umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho. Ngakho, kufaneleka futhi ngokuphelele ziwubala kukhona iziphakamiso ezilandelayo ukuze ababethweswa iziqu: "ikhompyutha eyisibungu!" (Informatics i amateur), "Botany" (I-biology lover), "nahimichit Amateur" (I-specialist kwamakhemikhali), njll
Ekaterinburg, ukuqeqeshwa isikhungo "Abazama": ikheli, othisha, ukubuyekezwa
Functional isikimu avelele
Imvelo kanye nezinhlobo ezomhlaba e izibalo kanye nezindlela ukubala kwabo. Izinhlobo ezomhlaba ezibalweni efingqiwe: izibonelo Ithebula
Indlela ukuya Harvard abalimi ezivela emazweni ayengaphansi kweSoviet Union
Abafundi hlelo lokushintshisana eRussia
Ukufumbathisa kwezohwebo: izici kanye nezici eziyinhloko
Uyini nophahla lwendlu ngezandla zakhe.
Stuntman Alexander Inshakov: nempilo yakho, Filmography. Inshakov Aleksandr Ivanovich
Izidakamizwa "Panadol izingane." Umyalelo, incazelo kanye nokubuyekeza
Ikhadi Inkomba ye imidlalo cebo-Ekwenza Umlingiswa eqenjini wokulungiselela enkulisa
Neziqubu ukukhwehlela somoya: izimbangela, imiphumela kanye nokwelashwa lwemithi. Ukukhwehlela somoya: ukwelashwa